Microsoft yatanga kuburitsa zvishoma nezvishoma kweiyo Chivabvu 2020 Gadziriso ye Windows 10 neboka reshanduko nyowani uye akati wandei maficha ekuvandudza ruzivo rweelaptops uye desktop desktop. Iyi ndiyo yechipfumbamwe ficha yekuvandudza, uye ndiyo yekutanga semi-yegore yekuvandudza ye2020 inowanika kune anotsigirwa michina.
Kunyangwe iyo kambani iri kupedzisa kusimudzira kare uye ichishandisa yakawanda nguva kuyedza uye kugadzirisa matambudziko mazhinji sezvinobvira kusati kwaburitswa kwekupedzisira, semhedzisiro yeshanduro 2004 inosanganisira yakakosha kodhi kodhi, zvinorevawo zvakawanda zvingangodaro zvinowirirana matambudziko, nyaya nevatyairi , zvikanganiso zvisingatarisirwi, nezvimwe.
Uye zvakare, nekuti iyo May 2020 Update inoda kudzoreredzwa kuzere, iwe unogona zvakare kusangana nedzimwe nyaya dzisiri mhedzisiro yekuvandudza nyowani. Kazhinji, kukwidziridzwa kunogona kutadza kunyorera nekuda kwematambudziko ekuchengetedza, zvirongwa zvisingawirirane, madhiraivhi akakanganisika kana echinyakare, kurongeka kwetsika, uye matambudziko nezvinhu zvemumuviri.
Muizvi Windows 10 tungamirira, isu ticharatidza mamwe ematambudziko aungangosangana nawo kuyedza kuisa iyo May 2020 Gadziriso uye zvinogoneka mhinduro.
Tora rubatsiro kugadzirisa nyaya dzekuisa iyo May 2020 Gadziriso ye Windows 10
Zvakanaka kuziva - Kana vhezheni itsva ye Windows 10 inowanikwa, unogona kumhanyisa mumhando mbiri dzematambudziko. Semuenzaniso, unogona kusangana nezvikanganiso zvinozivikanwa panguva uye mushure mekuvandudza, senge nyaya nekumisikidza, kuchengetedza, maficha, uye kugadzirisa system, izvo zvisiri hazvo matambudziko neshanduro 2004.
Zvino, pane nyaya dzinokonzereswa nemabhugi mune yekuvandudza ficha. Mamwe ematambudziko aya anogona kuve anoenderana nematyairi, kuenderana nemaapps kana echitatu-bato chengetedzo mhinduro.
Iri gwaro rinotarisa mukugadzirisa matambudziko akajairika ekuvandudza pamwe nemaitiro ekutenderera nenyaya dzinozivikanwa (kana dziripo) panguva uye mushure mekumisikidza uchishandisa Windows Kwidziridzo, Gadziridza Mubatsiri, kana Media Creation Chishandiso.
Nzira yekugadzirisa sei Windows Gadziridza matambudziko neiyo Chivabvu 2020 Gadziriso
Kunyangwe uchishandisa Windows Kwidziridzo ndiyo inokurudzirwa nzira yekukwiridzira kune itsva vhezheni ye Windows 10, haisi nzira isina chaanopomerwa, uye dzimwe nguva unogona kumhanyira muzvikanganiso zvinodzivirira komputa yako kubva mukuwana iyo yekuvandudza.
Gadzirisa zvikanganiso zvisingatarisirwi uchishandisa Windows Update
If Windows Kwidziridzo haisi kushanda, unogona kushandisa chinetso chekugadzirisa matambudziko kugadzirisa zvinowanzoitika nyaya.
Kugadzira Windows Gadziridza kurodha vhezheni 2004, shandisa matanho aya:
Click on Kwidziridzo & Chengetedzo.
Click on disposal.
Pasi pechikamu "Simuka unomhanya", sarudza iyo Windows Update kuita.
Baya Run the troubleshooter bhatani.
Baya Shandisa izvi kugadzirisa sarudzo (kana zvichibvira).
Nhamba yakakurumidza: Kana iwe usingaone sarudzo yekuisa gadziriso, zvakanaka. Iyo yekunetsa ichaisa zvigadziriso otomatiki. Zvino kana dambudziko richida kubvumidzwa nemushandisi, iwe uchaona iyo sarudzo.
Enderera nema on-screen mirayiridzo.
Tangazve chigadzirwa chako.
Paunenge wapedza matanho, Windows Kwidziridzo inofanira ikozvino kukwanisa kurodha pasi nekuisa iyo nyowani May 2020 Gadziriso.
Kana iwe ukawana iko kukanganisa 0xc1900223, zvinoreva kuti pane nyaya kurodha pasi iyo yekuvandudza, uye hapana chimwe chinhu chaunofanirwa kuita. Pane imwe nguva, Windows Kwidziridzo ichaedza kukwidzirazve.
Gadzirisa kukanganisa 0x80073712 uchishandisa Windows Update
Kana, panguva yekukwiridzira kusvika Windows 10 shanduro 2004, iwe unoona kukanganisa 0x80073712 meseji, zvino zvinoreva kuti rimwe kana akawanda emafaira anodikanwa anogona kunge asipo kana kukuvara.
Kugadzirisa iyi nyaya, unogona kushandisa iyo Dhipatimendi Sevhisi uye Management (DISM) chishandiso ne Command Prompt kudzoreredza mafaera ehurongwa kune inozivikanwa nzvimbo.
Kuti ushandise DISM kugadzirisa Windows Kwidziridzo, shandisa matanho aya:
Tora iyi inotevera kuraira uye pinda pinda:dism /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Mushure mekupedza nhanho, mafaira anodiwa achagadziriswa, uye Windows Kwidziridzo inofanira kutanga kushanda kurodha pasi uye kuisa yekutanga semi-yegore yekuvandudza ye Windows 10.
Gadzirisa kukanganisa 0x800F0922 uchishandisa Windows Update
Iko kukanganisa 0x800F0922 inogona kuoneka kana uchishandisa Windows Kwidziridzo, kana chishandiso chako chisingakwanise kubatana nemaseva ekuvandudza eMicrosoft, kana kana iyo Sisitimu Yakachengetedzwa isina nzvimbo yakakwana yemahara.
Kurega musangano weVPN
Kazhinji, iwe uchaona iko kukanganisa 0x800F0922 kana iwe uri kuyedza kukwidziridza kune Chivabvu 2020 Gadziriso, uye kubatana kweVPN kuri kushanda.
Kugadzirisa dambudziko iri, patsanura musangano weVPN uchishandisa matanho aya:
Dzvanya network network mubarbar.
Sarudza kubatana kweVPN.
Baya Dzinga bhatani.
Aya matanho achashanda kana uchishandisa iyo Windows 10 Zvirongwa zveVPN. Kana iwe uri kushandisa chimwe chishandiso, tarisa zvinyorwa zvaro kune mamwe marongero chaiwo.
Kudzoreredza Sisitimu Yakachengetedzwa chikamu
Kana chechitatu-bato chengetedzo software (senge antivirus) inochengeta dhata muiyo Sisitimu Yakachengetedzwa chikamu, saka pane mukana wakanaka wekuti vhezheni itsva ye Windows 10 haizo gadza.
Kana izvi zvikaitika, ungangoda kushandisa yechitatu-bato chishandiso kudzora iyo resevered partition kuti iite yakaenzana kana yakakura kupfuura 500MB. Neimwe nzira, iwe unogona kusarudza ku ita kuiswa kwakachena ine vhezheni 2004, iyo isingangogadzirise dambudziko chete, asi iwe unotanga nekuisa nyowani nyowani iyo inogona kugadzirisa zvapfuura nyaya nekuvandudza mashandiro.
Maitiro ekugadzirisa Media Rekugadzira Maturu matambudziko neMay 2020 Kuvandudzwa
Iyo Media Creation Chishandiso chishandiso chakagadzirirwa kunyanya kuita nyowani uye kusimudzira kuiswa kwe Windows 10, asi zvakare ine matambudziko ayo, kunyanya mukati memazuva ekutanga eMay 2020 Gadziriso.
Gadzirisa Midhiya yekugadzira Turu yakanamatira kurodha pasi
Sechikamu cheiyo yekuvandudza maitiro, iyo Media Creation Chishandiswa kurodha pasi yekumisikidza mafaera pamwe nechero imwezve yekuvandudza.
Chete caatat ndeyekuti chishandiso chinogona kunamatira kurodha pasi izvo zvimwe zvekuvandudzwa, uye zvinokudzivirira kuti uenderere mberi nekuvandudza kune vhezheni 2004.
Kana ikaramba iri pachikamu che "Kuwana zvigadziriso" kwenguva yakareba, unogona kushandisa matanho aya kutenderera dambudziko.
Baya pedyo bhatani.
Tanga iyo Media Creation Tool dzokorora.
Kungoti mafaira ekumisikidza apedza kurodha pasi, tambanudza tambo yedandemutande kubva pakombuta yako kana kuti tambanudza kubva kune yeWi-Fi network.
Ukangopedza iwo matanho, kurodha pasi kwekuvandudzwa kuchapera, uye iyo setup ichaenderera neichi chiitiko. Mushure mekusimudzira, Windows Kwidziridzo ichaisa chero ekuvandudzwa asara.
Gadzirisa Media Kugadzira Chishandiso kwete kutanga setup
Muchiitiko chekuti iyo yekumisikidza maitiro isingatange kurodha pasi yekuisa mafaera, ipapo ungangoda kutanga kumisikidza nemawoko.
Kutanga Windows 10 vhezheni 2004 setup manyore, shandisa matanho aya:
Enda kune nzira inotevera:C:$Windows.~BTSources
Bhinda kaviri setupprep.exe faira kuvhura setup wizard.
Mushure mekupedza nhanho, iwe unofanirwa ikozvino kugona kuenderera neyekuvandudza maitiro kune Chivabvu 2020 Gadziriso.
Muchiitiko chekuti iwe uchiri kubata nedambudziko rakafanana, saka unofanirwa kusimudzira uchishandisa iyo Update Assistant.
Maitiro ekugadzirisa USB midhiya matambudziko neiyo May 2020 Gadziriso
Kana kuiswa kwacho kukatadza kushandisa USB bootable media, ipapo pane mukana wakanaka wekuti flash drive ine mamwe akakuvara kana kushayikwa mafaera. Iwe unogona kukurumidza kugadzirisa dambudziko iri, kuitazve iyo yekuisa midhiya neMedia Creation Chishandiso.
Kugadzira media inotakurika ye USB kuisa Windows 10 shanduro 2004, shandisa matanho aya:
Vhura izvi Tsigiro yeMicrosoft Website.
Pasi pe "Gadzira Windows 10 yekuisa midhiya ”chikamu, tinya iyo Dhawunirodha chishandiso izvozvi bhatani.
Sevha iyo inosimudza pakombuta yako.
Bhinda kaviri MediaCourseTool2004.exe kutanga setup.
Baya Bvuma bhatani.
Sarudza iyo Gadzira kuisa media (USB flash drive, DVD, kana ISO faira) yeimwe PC kuita.
Sarudza mutauro wako, zvivakwa, uye marongero edhisheni, kana zvakasiyana nesarudzo yekusarudzika.
Sarudza iyo USB flash drive kuita.
Sarudza iyo inobvisa dhiraivha kubva pane iyo runyorwa.
Paunenge iwe wapedza nhanho, iwe unozopedzisira uine nyowani yekuisa midhiya nemafaira matsva aunogona kushandisa kukwidziridza chishandiso chako.
Kana iyo bootable midhiya ikatadza zvakare, edza nhanho imwezve imwe nguva, asi kubva kune imwe komputa. Kana shandisa imwe application, senge Rufus kugadzira iyo yekuisa midhiya.
Nzira yekugadzirisa sei Windows 10 setup matambudziko neiyo May 2020 Gadziriso
Sezvaunotanga kukwidziridzwa kweiyo Windows 10 Chivabvu 2020 Gadziriso, maitiro ekumisikidza anogona kutadza nemazhinji mameseji ekukanganisa zvichienderana nedambudziko riri kuvharira maitiro.
Sarudza Windows Setup zvikanganiso 0x8007042B 0x4000D uye 0x800700B7 0x2000A
Kana iyo setup ikatadza nekanganiso 0x8007042B 0x4000D kana kukanganisa 0x800700B7 0x2000A, zvino zvinoreva kuti imwe nzira iri kushanda kumashure.
Kazhinji, maitiro aya anobva kumashandisirwo uye masevhisi anomhanya pakutanga, senge kubva kuhurongwa hwehurongwa, yechitatu-bato antivirus, uye mamwe maratidziro edesktop.
Kana iwe uri kuita in-nzvimbo kusimudzira, unogona kushandisa Task Manager kumisa maitiro kana kunyorera. Heano maitiro:
Tsvaga Task Manager uye tinya mhedzisiro yepamusoro yekuvhura iyo app.
Baya More details bhatani.
Baya Basa rapera bhatani.
Dzokorora matanho Nha. 3 uye 4 kugumisa maapps asara.
Mushure mekupedza nhanho, tanga iyo setup futi uye kuenderera nekuvandudza.
Neimwe nzira, iwe unogona kuita bhutsu yakachena ye Windows 10 kutanga kukwidziridzwa, kana kuti unogona kumbobvisa chirongwa chiri mubvunzo.
Kuti ubudise maapplication (senge antivirus uye nhaka zvirongwa) izvo zvinogona kunge zvichipesana nekusimudzira, shandisa matanho aya:
Sarudza iyo app uye tinya iyo Uninstall bhatani.
Paunenge wapedza nhanho, haufanire kuona kukanganisa "0x8007042B 0x4000D" kana kukanganisa "0x800700B7 0x2000A," uye iwe unofanirwa kuve unokwanisa kuzadzikisa vhezheni yegore ra2004.
Sarudza Windows Setup kukanganisa 0xC1900107
The 0xC1900107 mhosho meseji inoratidza kuti chishandiso chakakwidziridzwa ichangoburwa kuva vhezheni itsva. Nekudaro, mafaera ekumisikidza epamberi achakamirira kubviswa usati watanga iyo nyowani yekuvandudza maitiro.
Kutangazve komputa kunowanzo gadzirisa dambudziko, asi kana iko kukanganisa kukapfuurira, shandisa iyo Kuchengetedza Sense kubvisa iyo yapfuura vhezheni nemawoko.
Kuchenesa mafaera ekumisikidza apfuura, shandisa matanho aya:
Baya Gadzira Sense yekuchengetedza kana unomhanya izvozvi kuita.
Pasi pechikamu che "Mahara kumusoro izvozvi", tarisa iyo Delete yapfuura shanduro dze Windows kuita.
Mushure mekupedza matanho, iyo yekumisikidza yapfuura ichabviswa, kugadzirisa iko kukanganisa "0xC1900107."
Sarudza Windows Setup kuisa matambudziko ekupedzisa
Kunyangwe iwe uri kuyedza kuisa nyowani ficha yekuvandudza kana yekuwedzera kuwedzeredza, unogona kumhanya mumaviri mhosho mameseji
Kukanganisa: Hatina kukwanisa kupedzisa izvo zvakagadziridzwa. Kubvisa shanduko. Usadzime komputa yako.
Kanganiso: Kukundikana kugadzirisa Windows Zvidzoreso. Kudzosera shanduko.
Aya ndiwo mameseji akajairwa, uye iwe uchafanirwa kuona iyo yekukanganisa kodhi kuti uwane mhinduro kana workaround.
Kuti uzive iko chaiko kukanganisa kuri kukutadzisa iwe kubva kuisa vhezheni 2004, shandisa matanho aya:
Baya Wona yako yekuvandudza nhoroondo kuita.
Tarisa iyo yekukanganisa kodhi padhuze nekutadza kuvandudzwa.
Paunenge iwe wapedza iwo matanho, iwe uchafanirwa kutsvagisa meseji online. Iwe unogona kukwanisa kuwana mhinduro kune mukuru Microsoft maforamu kana kushandisa iyo Windows Central maforamu.
Unogonawo kutarisa Windows 10 gadziridza nhoroondo yekutsigira peji kuti uone kana chairo gadziriso ine dambudziko uye kana Microsoft iine workaround yekudzora nyaya (kana zvichibvira).
Sarudza Windows Setup inogadziridza dambudziko
Kana iwe uri kutora iyo Kanganiso: Iyo yekuvandudza haina kushanda kune yako komputa meseji, zvinoreva kuti chishandiso chako hachina mhinduro, uye hauchakwanise kukwidziridzira mushanduro 2004 kusvikira zvigadziriso zvinodiwa zvaiswa.
Kuti utarise zvekuvandudzwa, shandisa matanho aya:
Baya Chengetedza zvinyorwa bhatani.
Ukangopedza iwo matanho, unogona kushandisa chero nzira dzakatsigirwa kusimudzira kune Chivabvu 2020 Gadziriso.
Sarudza Windows Setup kukanganisa 0x80200056
Iko kukanganisa 0x80200056 harisi dambudziko rakakomba. Meseji yacho chete inoratidza kuti chishandiso chakatangirwa netsaona panguva yekuvandudza maitiro.
Kugadzirisa iyi nyaya, mushure mekunge mudziyo watangazve, tangazve iyo Windows 10 Gadzirira.
Maitiro ekugadzirisa Ongorora Mubatsiri matambudziko neMay 2020 Kuvandudzwa
Pamusoro pe Windows Kwidziridzo neMedia Chishandiso Chishandiso, Microsoft inopawo iyo Yekuvandudza Mubatsiri, chinova chishandiso chakagadzirirwa kumanikidza kusimudzira kana Windows Kwidziridzo haisi kushanda nemazvo. Nekudaro, senge nechimwe chidimbu che software, hachisi chinhu chakakanganisika, uye dzimwe nguva, unogona kumhanyisa mumatambudziko.
Kana iwe uchinetswa nechombo, senge wakanamatira kurodha pasi May 2020 Gadziridza mafaera, ipapo ingangove iri dambudziko rine chekuita neinternet.
Kugadzirisa iyo Yekuvandudza Mubatsiri chishandiso, shandisa aya matipi:
Dzinga chigadzirwa kubva kunetiweki uchibvisa tambo yemagetsi kana kuremadza Wi-Fi. Paunenge iwe uchinge waita izvo, mira kweminiti imwe, uye wobatanidzazve network, uye tangazve iyo Yekuvandudza Mubatsiri.
Tangazve chigadzirwa uye vhura iyo Yekuvandudza Mubatsiri zvakare.
Dzorerazve chishandiso zvakare.
Kana iwe ukaenderera nedambudziko rakafanana, shandisa iyo Media Creation Chishandiso kuita yekumisidzana-munzvimbo kusimudzira kune Chivabvu 2020 Gadziriso.
Maitiro ekugadzirisa matambudziko ekuchengetedza neiyo Chivabvu 2020 Gadziriso
kunyange zvazvo Windows 10 ikozvino ngarava neReserved Storage, chinongedzo chinoisa parutivi chikamu cheyakaomesesa dhiraidhi nzvimbo yekuvandudzwa uye mafaera echinguvana, iwe unogona kuramba uchigumburwa pane mamwe meseji yekukanganisa inoenderana.
Iyo shoma hardware yekuisa Windows 10 vhezheni 2004 inoda inokwana 16GB yekuchengetera iripo kusimudzira 32-bit vhezheni kana 20GB yeiyo 64-bit vhezheni. Kana komputa yako isina nzvimbo yakakwana, haugone kuisa iyo nyowani vhezheni.
Kugadzirisa matambudziko ekuchengetedza kuyedza kukwidziridza kune Chivabvu 2020 Gadziriso, shandisa matanho aya:
Pasi pechikamu che "Local Disk", tinya iyo MaFaira enguva pfupi kuita.
Sarudza zvinhu kuti ujekese kusunungura nzvimbo.Kurumidza tambo: Haufanire kusarudza iyo "Windows Seta mafaera enguva pfupi ”kana"Windows ESD yekuisa mafaera ”sarudzo, sezvo aya ari mafaera anodikanwa kugadzirisa komputa yako.
Mushure mekupedza nhanho, iwe unofanirwa ikozvino kugona kuenda kuburikidza nekumisikidzwa kweshanduro 2004. Zvisinei, kana iwe ukaenderera usina nzvimbo yakakwana, unofanirwa kufunga nezvekuwedzera chekunze chekuchengetedza (senge USB flash drive kana yekunze hard drive) ne pa ingangoita 16GB yenzvimbo iyo system inogona kushandisa sekuchengetedza kwenguva pfupi otomatiki.
Unogona kushandisa gwara iri rine akawanda matipi kusunungura nzvimbo yekuchengetedza pakombuta yako.
Maitiro ekugadzirisa Hardware uye software kuenderana matambudziko neiyo May 2020 Gadziriso
Hardware uye kuenderana kwesoftware dzimwe nguva zvinodzivirira maitiro ekuvandudza, uye hauchakwanise kuenderera kusvikira waona nekugadzirisa mudzi wechikonzero.
Gadzirisa kukanganisa 0x80070002 0x20009
Sezvo iwe uchiyedza kukwidziridza kubva kune yekare vhezheni kuenda kuna Chivabvu 2020 Gadziriso, unogona kuona kukanganisa 0x80070002 0x20009 izvo zvinoratidza kuti iyo setup haigone kuwana chaiwo mafaira.
Iri nderimwe dambudziko rakajairika kukwidziridzwa kune vhezheni itsva ye Windows 10, uye iwe unogona kukurumidza kutenderedza nekukatanura chero dhiraivha yakabatana kune chako chishandiso, kusanganisira USB flash dhiraivha (kusanganisa media yekuisa yekutyaira) uye zvekunze zvinotyaira. Paunenge iwe wabvisa iyo yekunze, dzosera iyo setup kuti uenderere pamwe nekuvandudza.
Gadzirisa kukanganisa 0xC1900101
Kunyangwe iwe uri kuyedza kuisa vhezheni 2004 kana kumwe kuburitswa, iwe unogona kuona dzinoverengeka zvikanganiso kutanga ne 0xC1900101 or 0x80090011 izvo zvinogona kuratidza dambudziko nedhiraivha imwe kana kupfuura.
Aya ndiwo akasiyana "0xC1900101" makodhi ekukanganisa:
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingeita.
Kuti udzikise zvikanganiso panguva yekukwidziridzwa kweiyo Windows 10 Chivabvu 2020 Gadziriso izano rakanaka rekubvisa zvigadzirwa zvisina kukosha, zvakaita sekutyaira kwekunze, maprinta, zvishandiso zveBluetooth, zvishandiso zveUSB, makamera, nevamwe.
Mushure mekumisikidzwa, unogona kuvabatanidzazve.
Kugadziridza madhiraivha ekushandisa kune yazvino kuburitswa kunogona zvakare kugadzirisa chero eakakanganisa kodhi.
Kuti utarise zvishandiso zvekutyaira mutyairi pa Windows 10, shandisa matanho aya:
Zvichikosha: Kana uri kuwana EZVAKAITIKA wako mugadziri nokutsigira Website, muteverei mirayiridzo yavo, uye tisangosiya matanho pazasi.
Tsvaga Device Device, uye tinya mhedzisiro yepamusoro kuvhura iyo app.
Wedzera bazi nebazi rinokonzera nyaya. (Kazhinji, inozoiswa mucherechedzo weyellow chiratidzo.)
Tinya-kurudyi mudziyo uye sarudza iyo Update mutyairi kuita.
Baya Tsvaga yekombiyuta yangu yekutyaira software sarudzo kana iwe wakambotora pasi nyowani yekutyaira package. (Kana tinya iyo Tsvakurudza zvakananga kuti uvandudze software yekutya sarudzo yekutarisa kuti zviitwe zvoga.)
Baya Browse bhatani.
Sarudza nzvimbo ine mafaira ekufambisa (asina kuvharwa).
Paunenge wapedza nhanho, haufanire kuona mu "0xC1900101" kana "0x80090011" mhosho meseji panguva yeshanduro 2004 yekuisirwa.
Iwe unogona zvakare kutarisa iyi yakazara gwara nezvose zvaunoda kuti uzive kuvandudza vatyairi pa Windows 10.
Kana iwe ukaona imwe ye "0xC1900101" zvikanganiso, unogona kushandisa Zvigadziro zvekuchengetedza, uninstall zvisina-kukosha maapps nemitambo, uye fambisa mafaera ako kune imwe nzvimbo kuti usunungure nzvimbo.
Meseji yekukanganisa inotanga na “0xC1900101” inogona zvakare kuratidza dambudziko nekumisikidzwa kwazvino, uye semhedzisiro, haugone kuenderera.
Iwe unogona kukwanisa kugadzirisa dambudziko iri uchishandisa iyo Deployment Servicing uye Management (DISM), System File Checker (SFC), uye System File Checker (SFC) zvinoshandiswa kugadzirisa nyaya nekumisikidza.
Unogona kushandisa gwara iri nemirairo iwe unofanirwa kutevera kugadzirisa iyi nyaya.
Kana iwe usingakwanise kutenderedza iko kukanganisa, saka shandisa iyo Media Creation Turu kuti utange kutsva ne kuiswa kwakachena kwe Windows 10.
Gadzirisa kukanganisa kwehardware 0xC1900200, 0xC1900202, 0x80300024
Kana chishandiso chako chiri kutomhanyisa chero vhezheni ye Windows 10, ipapo zvingangoita kuti iwe usazoona izvi zvikanganiso. Nekudaro, kana iwe ukaona kukanganisa 0xC1900200 - 0x20008, 0xC1900202 - 0x20008, kana 0x80300024, ipapo komputa yako haina kusangana nezvinodiwa zvishoma zvehurongwa.
Izvi ndizvo zvidiki zvidiki zvinodiwa zvekuisa Windows 10 shanduro 2004:
Memory: 2GB ye32 bit kana 64 bit.
Dhiraivhi yakaoma: 16GB ye32 bit kana 20GB ye64 bit.
Graphics: DirectX 9 kana gare gare neWDDM 1.0 mutyairi.
Unogona kutarisa gwaro rino kuti unzwisise iyo Hardware zvirevo yemuchina wako. Nekudaro, kana iwe ukaona imwe yeiyi mhosho, ipapo zvinogona kuti ungangoda iwe simudzira iyo memory memory.
Gadzirisa mutyairi kukanganisa 0x800F0923
Mharidzo yekukanganisa 0x800F0923 zvinoreva dambudziko rekuenderana nemutyairi kana chirongwa pakombuta yako. Kana uchisimudzira kune itsva vhezheni ye Windows 10, Kanganiso iyi inowanzo nongedzera nyaya neiri giraidhi mutyairi, chirongwa chenhaka, kana yechitatu-bato antivirus.
Imwe nzira yekutsvaga nyaya ndeyekumhanyisa iyo Yekuvandudza Mubatsiri kana Media Creation Chishandiso, uye panguva yekumisikidza maitiro, kana paine dambudziko rekuenderana, maturusi anozozvitaura zvakajeka.
Muchiitiko chekuti iri dambudziko remutyairi, iwe unofanirwa kurodha pasi nekumisikidza nyowani vhezheni kubva kune inogadzira webhusaiti webhusaiti uchishandisa yavo mirairo. Kana zviripo, edza kurodha beta vhezheni yemutyairi, semazuva ekutanga eshanduro nyowani ye Windows 10, mugadziri ari muchikamu chekuyedza chevatyairi vatsva kuti vanyatsoenderana nekuburitswa kwazvino.
Bvisa mutyairi usingawirirane
Neimwe nzira, iwe unogona kubvisa mutyairi, kuenderera nekuvandudza, uye wozodzoreredza chishandiso (kana zvichibvira).
Kuti ubvise mutyairi anokonzera kukwidziridza matambudziko, shandisa matanho aya:
Wedzera bazi nebazi rine chishandiso chine matambudziko.
Tinya-kurudyi chinhu uye sarudza iyo Uninstall device kuita.
Mushure mekupedza iwo matanho, iwe unofanirwa ikozvino kukwanisa kupedzisa kukwidziridzwa kweiyo Chivabvu 2020 Gadziriso.
Uye zvakare, iwe unogona kuona kukanganisa 0x80070490 - 0x20007, iyo inoratidzawo zvisingaenderane mutyairi, uye kukanganisa 0x80070003 - 0x20007 izvo zvinoreva kukundikana kusimudzira panguva yekumisikidza driver driver.
Kana iwe ukatambira chero cheizvi zvikanganiso, iwe unofanirwa kuti madhiraivha ekushandisa ave kukonzera dambudziko, uye woedza iyo yekuvandudza maitiro imwezve nguva
Gadzirisa chikanganiso chepurogiramu 0xC1900208
Munguva yekukwiridzira kuita vhezheni 2004, zvakare zvinogona kuti iwe uchaona iko kukanganisa 0xC1900208 - 0x4000C. Iyi meseji inogona kuratidza kuti chirongwa chakaiswa pane chako chishandiso hachienderane uye chiri kuvharira maitiro. Kazhinji, iwo maapplication anokonzera dambudziko anosanganisira legacy desktop zvirongwa uye yechitatu-bato antivirus.
Kuti ubvise zvibvumirano zvisingaenderani kuti upedze kusimudzira, shandisa matanho aya:
Sarudza iyo isingaenderane chirongwa.
Ukangopedza iwo matanho, ungangoda kudzokorora iwo mirairo kuti ubvise mamwe anopokana maapplication.
Maitiro ekugadzirisa mushure mekumisikidza matambudziko neMay 2020 Kuvandudzwa
Kunyangwe kuiswa kwe Windows 10 vhezheni 2004 inogona kunge yakapedza zvinobudirira, iwe uchiri kugona kusangana nezvenyaya dzinoverengeka, senge dema skrini, kubatana kwenetiweki, uye kumisikidzwa.
Gadzirisa matema machena matambudziko mushure mekusimudzira
Nhema nhema panguva uye mushure mekusimudzira hazvishamise. Kazhinji, zvinoratidza dambudziko nemadhiraivha mutyairi, Hardware, kana zvinogona kuratidza kuti iyo nyowani vhezheni haina kushanda nemazvo.
Iyo yekukurumidza resolution ndeye kubvisa May 2020 Gadziriso kubva pakombuta yako uchishandisa Yepamberi yekutanga marongero:
Batidza komputa yako.
Achangosvika iwo Windows logo inowanikwa pachiratidziri chako, tinya iyo simba bhatani. (Izvi zvinobva zvangokanganisa kuteedzana kwebhutsu.)
Dzokorora matanho Nha. 1 uye 2 dzimwe mbiri mbiri.
Baya Zvinyorwa zvitsvaga bhatani.
Pamusoro pezvirongwa zvekutanga zvekutanga, tora pa disposal.
Click on Zvinyorwa zvitsvaga.
Click on Uninstall Zvidzoreso.
Click on Uninstall yazvino ficha yekuvandudza.
Saina-mukati neako Windows 10 nhoroondo.
Baya Uninstall ficha inogadziridza bhatani.
Mushure mekupedza matanho, Windows 10 vhezheni 2004 ichabviswa, kudzoreredza iyo yapfuura kuisirwa uye kugadzirisa iyo nhema dema skrini. Zvakare, zvinokurudzirwa kuti usasimudzire zvakare kusvikira chigamba chitsva chavepo chinogadzirisa dambudziko.
Gadzirisa dambudziko remumbure mushure mekusimudzira
Mushure mekuisa iyo Windows 10 Chivabvu 2020 Gadziridza, pane mukana wekuti iwe uwane matambudziko enetiweki, senge anononoka waya kubatana, kubatana kwepakati, hapana kubatana zvachose, kana adapta haipo.
Troubleshoot network dambudziko
Kugadzirisa matambudziko neadapter network mushure mekuisa vhezheni ya2004, shandisa matanho aya:
Click on Network & Chengetedzo.
Click on chinzvimbo.
Pasi pechikamu che "Advanced network settings", chengeta Network Troubleshooter bhatani.
Paunenge wapedza matanho, network inofanira kutanga kushanda zvakare.
Dzorerazve network adapters
Kana dambudziko rikaramba riripo, kugadzirisa patsva netiweki kunozobvisa, kuisazve, uye nekumisikidza zvigadziriso zvingagadzirise dambudziko.
Kuti ugadzirise zvakare Wi-Fi pamwe neanowaniswa netiweki adapta mushure mekusimudzira kuita shanduro 2004, shandisa matanho aya:
Pasi pechikamu "Chinja maratidziro enetiweki", tinya iyo Network reset bhatani.
Baya Dzosera izvozvi bhatani.
Mushure mekupedza matanho, Windows 10 ichabvisa uye kudzoreredza ese ma network adapters, uye ichagadzirisa zvigadziriso kumafekitori avo ekugadzirisa kugadzirisa dambudziko rekubatana.
Muchiitiko icho iwe urikusangana nematambudziko enetwork, yeuka kuti panogona kuve nezvakawanda zvikonzero, zvinosanganisira matambudziko neadapter, mutyairi, marongero, chiratidzo, tambo, router, internet service provider (ISP), uyezve, bug ine vhezheni 2004.
Gadzirisa dambudziko rekugadzirisa mushure mekuvandudza
On Windows 10, kana uchinge wamisa iyo yekumisikidza, chishandiso chinozoitwazve otomatiki mushure mekusimudzira kana kuchenesa kumisikidza pasina chikonzero chekutaipa kiyi yelayisensi. Nekudaro, pachave nenguva dzekuti kumiswazve kusashanda, uye unozogashira “Windows isina kuvhurwa ”meseji nekanganiso 0x803F7001 mune peji reKushandisa peji.
Kana izvi zvikamboitika, shivirira uye mirira, Windows 10 ichagadzirisa gare gare otomatiki. Nekudaro, kana anga ari mazuva mashoma, unogona kushandisa iyo activation troubleshooter kumisikidza chishandiso chako kumhanya iyo Chivabvu 2020 Gadziriso.
Maitiro ekugadzirisa memory kutendeka ichivharira kuisa kweiyo Chivabvu 2020 Gadziriso
Kana iwe uri kuyedza kukwidziridzira kune Chivabvu 2020 Gadziriso, iwe ungangoona iyo "Yako PC maseturu anoda kugadziridzwa usati wavandudza kune yazvino vhezheni ye Windows 10. Dzima memory memory kutenderera kuti uenderere mberi ”meseji inokutadzisa iwe kuenderera nekumisikidza.
Maererano nekambani, pane dambudziko rekuenderana nemamwe maratidziro ekuratidzira, uye iri kukurudzira kuvandudza iwo madhiraivha emifananidzo kune yazvino vhezheni. Nekudaro, iyo inokurumidza nzira yekudzora dambudziko iri kuremadza memory memory ficha.
Kugadzirisa iyi nyaya, unofanirwa kuremadza memory memory ficha uchishandisa aya matanho:
Open Windows chibatiso.
Click on Kuchengetedzwa kwemidziyo.
Baya Core yekuzviparadzanisa ruzivo kuita.
Bvisa iyo Kuyeuka kutendeseka toggle switch.
Ukangopedza iwo matanho, iwe uchave unokwanisa kumhanyisa iyo setup ye Windows 10 zvakare gadza vhezheni 2004.
Maitiro ekugadzirisa dambudziko nevakuru veNvidia GPU vatyairi pane Chivabvu 2020 Gadziriso
Kana panguva kana mushure mekumisikidzwa kweiyo vhezheni ya2004, iwe unogashira Blue Screen yeRufu (BSoD), zvingangoita nekuti urikushandisa mutyairi wemifananidzo yekare kubva kuNvidia. Sekureva kweMicrosoft, pane inoenderana nyaya nedzimwe shanduro dzeNvidia dzinoratidza maadapter, uye kambani inokurudzira kutarisa nekugadzirisa madhiraivha evhidhiyo kune yazvino vhezheni (kana zvichibvira).
Kuisa madhiraivhu emifananidzo ichangoburwa, unogona kushandisa rairo idzi.
Neimwe nzira, kana iwe uchiri pane yapfuura vhezheni ye Windows 10, zviri nani kuti usasimudzire kusvikira mhinduro yawanikwa. Nekudaro, kana iwe watokwidziridzwa, uye urikusangana nematambudziko, unogona kuyedza kudzosera kumashure kune vhezheni yapfuura uchishandisa matanho aya:
Click on kupora.
Pasi pe "Dzokera kune yapfuura vhezheni ye Windows 10”Chikamu, tinya iyo Tanga bhatani.
Tarisa uone chero zvikonzero zviripo.
Baya Kwete, ndatenda bhatani.
Baya Next bhatani zvakare.
Baya Dzokera kune yekutanga kuvaka bhatani.
Zvakare, kambani iri kushanda padhuze naNvidia kuti iwane resolution yechigarire, iyo inotarisirwa kuburitsa mune ramangwana kugadzirisa.
Maitiro ekugadzirisa Cortana haavhare pane iyo Chivabvu 2020 Gadziriso
Kutanga neMay 2020 Gadziriso, Cortana inova app yenguva dzose iyo inogadziridza kuburikidza neMicrosoft Store, uye haichabatanidzwe mukati Windows 10. Nekudaro, mushure mekuisa vhezheni 2004, vamwe vashandisi vari kuzivisa kuti Cortana haivhare zvakakwana pavanenge vavhara, sezvo iwe uchiri kuzoona iyo app kana uchivhura Basa Kuona kana shandisa Alt+Tab keyboard shortcut.
Hazvina kujeka kana maitiro aya ari bug kana kana iyo app yakagadzirirwa nenzira iyoyo, asi kana iwe uchida kuvhara iyo app, unogona kushandisa matanho aya:
Baya Nzira Tab.
Sarudza iyo Cortana Process.
Ukangopedza iwo matanho, Cortana anozovhara zvizere Windows 10.
Kana iwe uchida kudzivirira Cortana kubva kuvhura pakutanga, shandisa matanho aya:
Click on Tanga.
Bvisa iyo Cortana toggle switch.
Mushure mekupedza nhanho, Cortana haachazotanga otomatiki paunopinda mairi Windows 10.
Maitiro ekugadzirisa DisM huwori mushumo pane Chivabvu 2020 Gadziriso
Maererano neMicrosoft, Mushure mekushandisa iyo Deployment Image Sevhisi uye Management (DISM) raira ne /restorehealth sarudzo pane mukana wekuti chishandiso chitaure huwori kunyangwe dambudziko ragadziriswa kumhanya kuraira.
Kana iwe uine iyi nyaya, unogona kukurumidza kugadzirisa nyaya iyi nekumhanyisa iwoyu iwo murairo zvakare kuti usimbise mamiriro azvino ehurongwa kana kushandisa iyo /ScanHealth sarudzo nematanho aya:
Tora iyi inotevera kuraira uye pinda pinda:DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Ukangopedza nhanho, haufanire kuzogashira iwo meseji wekuti huori huripo.
Maitiro ekudzikisira matambudziko kusimudzira ku Windows 10 May 2020 Update
Iko kuvandudzwa kwe Windows 10 kugadzirisa zviuru zvehurdware uye kumisikidzwa kwesoftware inzira yakaoma kunzwisisa, zvinoreva kuti panogara paine mukana wematambudziko panguva uye mushure mekuvandudza.
Nekudaro, iwe paunogadzirira zvinoenderana, iwe unogona kudzikisira uye, kazhinji yenguva, kubvisa chero mhando dzenyaya apo iwe uchienda kune itsva vhezheni, senge iyo Windows 10 Chivabvu 2020 Kwidziridzo.
Kuchengetedzwa kwekombuta yako yese ndeimwe yematanho akanyanya kunaka aunotora kuti ugadzirire usati wagadziridzwa. Iyo Windows 10 setup maitiro anosanganisira nzira yekuchengetedza yekudzoreredza kuiswa kwepamberi kana paita dambudziko, asi hazvishande nguva dzose sekutarisirwa.
Usati wadzvanya bhatani rekuisa, tora nguva yako ku gadzira kuchengetedza kwenguva pfupi. Iwe unogona kushandisa chero chechitatu-bato chishandiso, kana iwe unogona kushandisa iyo legacy system mufananidzo backup turu inowanikwa pane Windows 10.
Pamusoro peiyo backup, zvinokurudzirwa zvakare kuti dzorere faira kune yekunze hard drive kana gore storate sevhisi, senge OneDrive.
Bvisa mapurogiramu asina kukosha
Legacy desktop apps uye yechitatu-bato antivirus mhinduro kazhinji chikonzero chinoita kuti kuiswa kukundikana. Izvi zvinoreva kuti izano rakanaka kubvisa maapplication aya usati waenderera nekuvandudza. Unogona kuvadzorera mushure mekuisa iyo Chivabvu 2020 Gadziriso.
Kubvisa maapplication pa Windows 10, shandisa matanho aya:
Sarudza iyo app yaunoda kubvisa, uye tinya iyo Uninstall bhatani.
Ukangopedza iwo matanho, ungangoda kudzokorora iwo mirairo kuti ubvise mamwe maapplication anogona kukonzeresa kukakavara.
Kuremadza kuchengetedza software
Kuwedzera pakubvisa zvinopesana maapplication, iwe unofanirwa zvakare kufunga nezve kubvisa wechitatu-bato antivirus uye imwe yekuchengetedza software kwenguva pfupi. (Mushure mekuvandudza, unogona kudziisa zvakare.)
Kunyangwe zvisingaite, kana dambudziko riri Windows Defender, haugone kuibvisa, asi unogona kuidzima kuti uenderere mberi nekuvandudza.
Zvichikosha: Kubvisa kana kuremadza mhinduro yekuchengetedza kwechinguva kune njodzi dzepasi-kune-dzekuchengetedza. Nekudaro, zvinofungidzirwa kuti iwe unonzwisisa kuti hazvina kumbobvira zvakurudzirwa kusiya chako kifaa pasina dziviriro. Enderera nokungwarira. Wanyeverwa.
Kuremedza kwenguva pfupi Windows Defender Antivirus, shandisa matanho aya:
Click on Utachiona & kutyisidzira kuchengetedzwa.
Pasi pe "Virus & tyisidziro yekuchengetedza zvirongwa" chikamu, tinya iyo Manage settings kuita.
Bvisa iyo Yechokwadi-nguva dziviriro toggle switch.
Mushure mekupedza matanho, iyo antivirus haifanire kupokana neyakagadziriswa maitiro, uye inozogonesa zvakare otomatiki mushure mekumisikidzwa kwe Windows 10.
Kana chishandiso chiri kushomeka pane pekuchengetedza nzvimbo, iyo nyowani vhezheni haizoisa. Nekudaro, imwe zano yakanaka ndeyekusunungura nzvimbo kuti uve nechokwadi chekuti setup inomhanya sezvanga zvichitarisirwa.
Unogona kushandisa uyu mutungamiri kuti uwane yakanakisa sarudzo yekusunungura nzvimbo pakombuta yako.
Bvisa zvigadzirwa zvisina kukosha
Kazhinji, zvisina-kukosha zviwanikwa zvakabatana necomputer yako zvinogona kukonzera kuiswa kutadza. Usati waenderera mberi neMay 2020 Gadziriso yekumisikidza, bvisa USB flash drive, makadhi e SD, ekunze madhiraivha akaomarara, maprinta, scanner, dongles, uye zvishandiso zveBluetooth.
Zvakare, kana iwe uri kushandisa laputopu yakabatana kune docking chiteshi, chidzimure usati waenderera.
Chengeta chete izvo zvaunoda, zvinosanganisira mbeva, keyboard, kuongorora, uye internet kubatana. Zvino mushure mekushandisa iyo yekuvandudza, unogona kubatanidzazve zvigadzirwa zvako zvese.
Iyo firewall inogona zvakare kukonzera matambudziko kana iine yakasarudzika dhizaini, kana iwe uri kushandisa imwe mhinduro isingatambe nemazvo Windows 10.
Kana iwe uri kushandisa yechitatu-bato firewall, tarisa kune iwo anovandudza mirairo kudzima software. Mune zvisingawanzoitika nyaya yekuti dambudziko ndere Windows Firewall, kudzima iyo ficha, shandisa matanho aya:
Click on Firewall & network kudzivirira.
Dzvanya "inoshanda" network.
Bvisa iyo Windows firewall toggle switch.
Mushure mekupedza matanho, Windows 10 vhezheni 2004 inofanirwa kurodha pasina zvinokanganiswa.
Dzima kubatanidza metered
Kana iwe wakambogadzira network yekubatanidza senge metered, iyo Windows 10 vhezheni 2004 haizoregedze pane chako chishandiso.
Kana iwe uri kushandisa yakaganhurirwa internet yekubatanidza, zvinokurudzirwa kuti ubatanidze kune yakajairwa isina kuvharwa network, bvisa iyo masetingi, uye uenderere nekusimudzira.
Kuti ubvise metered marongero ekubatanidza, shandisa matanho aya:
Sarudza inoshanda network yekubatanidza.
Pasi pechikamu che "Metered connection", bvisa iyo Ita sehutano hwemaseri toggle switch.
Neimwe nzira, iwe unogona kugadzira USB inotakurika midhiya pane imwe komputa yakabatana kune imwe netiweki, uye wozoshandisa iyo midhiya kuti uite isingabvumirwe mune-nzvimbo kusimudzira.
Shandisa yakachena kuisirwa
Kana iwe uchida kudzikisa mikana yematambudziko, sarudzo iri nani ndeye kuita yakachena kuisirwa.
Kuiswa kwakachena kuchabvisa zvese pane main drive uye kuchaisa kopi nyowani ye Windows 10, iyo inobatsirawo kugadzirisa nyaya dziripo.
Kana iwe uchida kuenda neiyo yakachena kuisirwa, iwe unofanirwa kugadzira iyo flash drive bootable uchishandisa iyo Media Creation Chishandiso, uye wozoshandisa iyo kutanga chako chishandiso uye kuenderera pamwe nekuisa nyowani.
Kunyangwe iri nzira yakatwasuka, iwe unofanirwa kuita akawanda matanho. Kana iwe uchida rubatsiro, shandisa iyi ratidziro izvo zvinosanganisira zvese zvaunoda kuti uzive kuita yakachena kuisirwa kwe Windows 10.
Kuputira zvinhu app
Microsoft yanga ichishanda zvine mutsindo kugadzirisa uye kuona kuti vashandisi vanopinda muchiitiko chakanaka kusimudzira vhezheni itsva ye Windows 10, asi nehurongwa hwakaoma kudaro, pachave paine mukana wekuti chimwe chinhu chikanganise.
Kana iwe uri kusimudzira kune iyo nyowani vhezheni ye Windows 10, uyu gwaro rinofukidza yakawanda ivhu yekugadzirisa rinenge rese dambudziko rinozivikanwa panguva uye mushure mekumisikidzwa kweiyo Windows 10 Chivabvu 2020 Kwidziridzo.
Nekudaro, rangarira izvo hazvina kumbobvira zvakurudzirwa kusimudzira nekukurumidza kana chimiro chekugadzirisa chave chagadzirira, sezvo chingave chiine nyaya dzisingazivikanwe uye zviputi zvinogona kukanganisa chiitiko ichi. Kazhinji, zvakanakira kumirira kusvikira mushure mekuvandudzwa mashoma ekuvandudzwa ave kuwanikwa kuti uve nechokwadi chekuti urikuisa kuburitswa kwakadzikama.
Wanga uine matambudziko here kukwidziridza ku Windows 10 mhando 2004? Regai tizive mune zvakataurwa uye utiudze iyo gadziriso iwe yawakashandisa.
Nzira Yokugadzirisa USB Dhiyabhorosi Isingazivikanwi kukanganisa kweSamsoni Phones